Noocyada kuleylka kuleylka ee dusha sare ee birta
Noocyada kuleylka kuleylka ee dusha sare ee birta waxay kuxirantahay arimahan: 1) oo sababa isbadal kudhaca xuduudaha korontada iyo birlabta birta maadama natiijada heerkulka uu kordhay (isbadaladaan waxay keeneyaan isbadal kuyimid xaddiga kuleylka laqiyaasmay ee xooga la siiyay ee korantada ee xilliga laqabsiga) iyo, 2) sababaha mas'uulka ka ah isbeddelka xoogga aaladda elektromagnetic-ka inta lagu jiro kuleylka (ie, isbeddelka hadda ku jira inductor).
Waxyaabahani waxay la xiriiraan isbedelka ku yimaadda xuduudaha indha-indheeyeyaasha inta lagu jiro kuleylka birta iyo
waxyaabaha u gaarka ah ee naqshadaysan ee qalabka isdabajoogga sare, yacni, in awoodda la isticmaalay ay nidaamsan tahay inta lagu jiro hawsha kululaynta. Xaaladaha badankood, xoojinta aagga elektromagnetic ee soo-saaraha ma sii ahaanayo mid joogto ah inta lagu jiro kuleylka, isbeddelkan wuxuu saameeyaa qaabka wareegga-heerkulka.
Kuleylka induction daaweynta kuleylka ee qaybaha baabuurta waxaa markii ugu horreysay loo isticmaalay warshaddeenna. Sannadkii 1937-1938
daminta qoorta fallaadhaha mashiinka ZIS-5 waxaa lagu soo saaray warshadeenna iyadoo lala kaashanayo shaqaalaha
shaybaarka VP Vologdin. Qalabka waxaa lagu rakibay qayb ka mid ah khadka wax soo saarka joogtada ah, kaas oo
Qaybaha waxaa lagu soo rogay daaweyn farsamo oo ku saabsan qalab-heer sare ah oo heer sare ah. In ka badan 61% ka mid ah
alt qaybaha matoorada ~ ae ZIL-164A iyo ZIL-157K gawaadhida ayaa dusha sare ka sii adkaanaya kuleylka kuleylka.
Joojinta dusha sare ee Qalabka Mashiinka Kadib Kuleylka kuleylka.
Kuleylka kuleylka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa daaweynta dusha sare ee qaybaha.
Categories Technologies Tags kululaynta induction, dusha kuleylka induction, kululeeyaha deminta induction, Mashiinka deminta induction, dusha sare ee deminta induction, nidaamka deminta induction, dusha sare ee induction, dusha dabka, bir dabka ka baxda Post navigation